Ngingaphumelela Kanjani NgePinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 487
I-Pinterest yipulatifomu namuhla enikeza abantu imvume yokukhombisa okuhle kakhulu futhi baphuphe ngamaphrojekthi wesikhathi esizayo abafuna ukuwafeza. Kukho konke lokhu ukubonakaliswa kokubekezela kuyadingeka kepha ngaphezu kwakho konke, ukusebenzisana okuzosebenza njengendlela ebalulekile yokuphumelela.
Yize amanye amapulatifomu ekucela ukuthi uvele kumavidiyo okungenani amasekhondi ayi-10 ngaphakathi kwanoma imaphi amakhasi, ku-Pinterest kwenzeka okuphambene nalokho. Enye yezinto abantu abanentshisekelo yokuphumelela kwinethiwekhi okufanele bayenze ukudala amathuba nemibono yomphakathi.
Abantu ababheka izinketho kuPinterest babona okuhle kakhulu kubo ukuvuselela izindlu zabo, izindawo zokusebenza ngisho nokuqala amaphrojekthi womuntu siqu. Ngenxa yakho konke lokhu, konke okubonwa emsamo kuzophoqelelwa.
Abasebenzisi abaningi bakukhombisile lokho I-Pinterest ingenye yamapulatifomu amahle kakhulu lokho bekungukufeza amaphupho nemibono yabasebenzisi namuhla. Kusukela ekudalweni kwayo, ibingakwazi ukunganakwa umzabalazo ewugcinayo ukuze ungafani namanye amanethiwekhi futhi ngenxa yalokhu, gwema izinkinga ezizayo.
Ngalesi sikhathi, uzofunda okuncane mayelana nokuthi ungalithuthukisa kanjani ikhwalithi yalokho okwenziwayo ngaphakathi kwePinterest futhi ngaphezu kwakho konke, ukuthi ungaqhubekela phambili ngayo yonke impahla yokudala okufanele uyijabulele.
Sebenzelana namanye amanethiwekhi
Ngokuya ngokuthi yimiphi imisebenzi ezokwethulwa ku-Pinterest futhi ngaphezu kwakho konke, izithombe okufanele bazithuthukise, kuwumqondo omuhle ukuzifaka ukusebenza kwezinkinobho zokuxhuma.
Leli thuba lizokwamukela abanye abasebenzisi ukuthi babone konke okuqukethwe okusha okufanele bakunikeze ngesikhathi esifanele. Ngaphezu kwalokho, izikhangiso zizofika ngasosonke isikhathi nezindawo ukuzuza imiphumela engcono.
Enza ngendlela oyifisayo i-URL yakho
Uma ufuna abanye abantu bakuthole kuzinjini zokusesha, kungadingeka ukuthi ushintshe i-URL ukuze uthole imiphumela engcono. Ukusuka lapho, abantu bazogcwala ngokugcwele ngena kusuka noma ikuphi uye kungxenyekazi yakho yePinterest.
Chaza izithombe zakho
Lapho udala ibhodi, noma umane wenza izikhonkwane ezintsha, kubaluleke kakhulu ukuthi ubeke incazelo. Lokhu kuzosiza abasebenzisi ukuthi bazi ukuthi uvelaphi nokuthi uya kuphi ngaphandle kokumba futhi ungakutholi abakufunayo noma abangenakho.
Kungumqondo omuhle futhi wokusebenzisa lonke ulwazi lwe-SEO ongakuthola noma ofuna ukukuthola. Ngokungangabazeki, ngenxa yalokhu, abantu abaningi bangakuthola endaweni yesikhulumi.
Yini okungafanele uyenze kuPinterest?
Manje, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi iziphi izinto ezingafaneleki ukubamba iqhaza kwiPinterest.
Kufanele ugweme ukuthumela izithombe ezingcolile noma ezibucayi ku-Pinterest
Awukwazi ukucasula abasebenzisi endaweni yesikhulumi
Kuyadingeka ukuthi uphendule kuyo yonke imilayezo engaphakathi kwePinterest
Izikhonkwane zokwabelana kufanele zibe ebhodini lokuhleleka okungcono
I-akhawunti yakho izobuyekezwa njalo ukuze yazi imisebenzi
1 Phumelela ku-Pinterest
1.1 Sebenzelana namanye amanethiwekhi
1.2 Enza ngendlela oyifisayo i-URL yakho
1.3 Chaza izithombe zakho
2 Yini okungafanele uyenze kuPinterest?
Izici ezenza i-Gmail ihluke